कम्युनिष्ट चरित्रको विम्व हुनपुगेका महरा - Harekpal
कम्युनिष्ट चरित्रको विम्व हुनपुगेका महरा
२० आश्विन २०७६, सोमबार १५:०७ मा प्रकाशित0प्रतिक्रिया
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अत्यन्त प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा पक्राउ परेपछि त्यस पार्टीका कार्यकर्ताको शीर पक्कै पनि निचो भएको हुनुपर्छ । संसारका कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेपाली विम्व हुनपुगेका छन् महरा । जतिसुकै पसिना वहाए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको शीर अव ठाडो हुने छैन । भ्रष्टाचारका अनगिन्ती घटनाले आकण्ठ डुवेकाहरु र यौन हिंसा र मानव अधिकारको हननमा जीवनभर कार्य गर्नेहरु शीर्ष पंक्तिमा रहेसम्म वा तल्लो सिढीमा विराजमान भएसंम कम्युनिष्ट पार्टीले क्षति भोग्नु अनिवार्य छ । तर जनताले महरा प्रवृत्तिकै समर्थन गरिरहे भने यो प्रवृत्ति निरन्तर हावी भइ नै रहने छ । यस प्रवृत्तिलाई स्थापित गराउन , महरालाई महान् सिद्ध गराउन, उनलाई निर्दोष सिद्ध गर्न केही उरण्ठेउला , घमण्डी ,कुजात, दोहोरो जीवन वांचिरहेका कुतर्कका भाडाहरु अहिले पनि अनेक कुतर्कको खेती मात्र गरिरहेका छैनन् यो काण्डलाई सकेसम्म अन्य भ्रान्त जानकारीहरु, सूचनाहरु, प्रायोजित सोचहरुको खेती गरेर अन्यत्र नै मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो हास्यास्पद खेतीमा विस्वास गर्नेहरुलाई विस्वास गर्ने स्वतन्त्रता त छ नै महराजीलाई भगवान् मानेर पूजागर्ने स्वतन्त्रता पनि उनीहरुमा निहीत छ । त्यस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रमा कसैले पनि हनन् गर्दैनन् ।
कम्युनिष्ट सिद्धान्तले दोहोरो मापदण्ड अख्तियार गरिरहेको हुन्छ । सिद्धान्तले नै अवसरवादलाई प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो संगठन निर्माण भन्दा पनि अर्को कुनै शक्तिशाली संगठन भित्र पसेर सकेसम्म कव्जा गर्नु नसकेमा विध्वंस गर्नु भन्ने सिद्धान्तका अनुयायीहरुमा अवसरवाद वाहेक हुने केही होइन र दोहोरो मापदण्ड उनीहरुको जीवन पद्धति हो । केही कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरुलाई छाडेर अधिकांश कार्यकर्ताहरुको दीक्षा यही नै हो । पुष्पलाल, मनमोहन, तुल्सीलाल, देखि लोककृष्ण भट्टराई, वोधराज काफ्लेहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा रहनु आफैमा दुर्लभ कुरा हो । आदर्शको कुरा गर्ने पुष्पलाल , मनमोहन अधिकारीहरु आजका दिनमा जीवित रहेका भए के भन्ने थिए होलान् ? के यस्ता कार्यकर्ताहरुको नेता भएर कम्युनिष्ट भइनै रहन्थे होलान् ? भरखरै माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनकी एक सशक्त महिला खिमा रिजालको कृति उज्यालोको खोजी आएको छ । त्यसमा उनले कम्युनिष्टहरुको यौन चाहना र पिपासु चरित्रको अत्यन्त भावुक भएर वर्णन गरेकी छिन् । गाउमा पुगेर केही पैसाका विषयमा , योैन र संबन्धका विषयमा भाटे कार्वाहीको क्रूर प्रयोग गर्ने माओवादीहरुको अन्तरंग कस्तो थियो ? यिनीहरु कति यौन पिपासु थिए त्यसको केही झल्को मिल्छ खिमाको आत्म वर्णनबाट । हुन त आलोक प्रवृत्तिको चर्चा अहिले पनि व्याप्त छ माओवादीमा । अव त त्यो चर्चा एमालेसंग विलयीकरणसंगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि सरेको छ । हिजोका दिनमा माओवादीहरुले गरेका सबै खरावीहरुको भारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध सबैले वोक्नै पर्ने हुन्छ । म चाही अलग छु भनेर सुख पाउने अवस्था छैन । कि त आफूलाई सत्चरित्रवान् देखाउन चाहनेहरुले अव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट पृथक हुने साहस देखाउन सक्नु पर्छ ।
अहिलेको सरकार दुईतिहाइको हो र यसकालागि महराको पनि पसीना वहेको छ । यसैकारण उनलाई पक्राउ गर्दा समेत सामान्य अपराधी , दोषी वा अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार नगरी प्रहरिले उनलाई दशैंमा टिका थाप्न आएको जुवाइलाई जस्तो गरी व्यवहार गरेको देखियो । आफ्नै सवारी साधनमा अरु कसैले नदेखोस् जस्तो गरी अघिपछि सुरक्षाकर्मीबाट जसरी सभामुख हुदा उनलाई स्कर्टिड. हुन्थ्यो त्यसरी नै सवारी चलाएको देखियो । कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने भनाइ असत्य सावित गर्ने काम यसरी हुनपुग्यो । यही हो सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । तर जे भएपनि महरा पक्राउ परेका छन् । यसमा नेपाल प्रहरिको सक्रियता, अदालतको उपयुक्त आदेश , संभवतः प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा र पार्टीका अध्यक्ष दाहालको समेत सही निर्णय रहेको हुनुपर्छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि बालिका खड्का नामक महिलाबाट निरन्तर आरोपित छन् उनका विषयमा पनि यथातथ्य सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । यदि राई निर्दोष हुन् भने आरोप लगाउनेमाथि कार्वाही हुनुपर्दछ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वोल्ड निर्णय लिनु आवस्यक छ ।
हिंसाकालको क्रूर समयमा कति चेलीहरुले सिन्दूर पुछे, कतिले आफ्नो शरीरको स्वत्व गुमाए, कतिले यौनपिपासुहरुको जवर्जस्ती शोषण सहनु पर्यो र जीवन र मृत्युको खेल खेलिरहनु पर्यो होला ? विस्तारै खुल्दै जाने छ । सेता लुगा भित्रका यस्ता कलंकहरुको पतन अनिवार्य हुनैपर्दछ । यस्ता कलंकहरुका शरीरबाट पर्दा उठ्नेक्रम निरन्तर हुनुपर्दछ । यदि अरु दलहरुमा पनि यस्ता यौन पिपासु सफेद पोसहरु छन् भने तिनीहरुले पनि औंला उठाउने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्छ । धेरै सफेदपोसहरुका काला कर्तुत सुनिरहिन्छ तर सार्वजनिक भएका हुदेैनन् । रोशनी, खिमा, बालिका सहित केही अरुहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । ती साहसिला महिलाहरुको संमान हुनैपर्दछ । तर पहिलो दिन बलात्कार गरेको भिडिओ रेकर्ड सहित संचारमाध्यममा आउने, दोस्रो दिन महरालाई पिता समान र उहांले केही नगरेको भन्ने, तेस्रो दिन आफ्नो पतिसंग संवन्ध विच्छेद गर्ने र चौथोदिन महरा विरुद्ध बलात्कारको कोशिष गरेको भनी निवेदन दिने रोशनीका विषयमा पनि छानवीन हुनु पर्ने हुन्छ कतै उनमाथि कुनै अन्य खाले दवाव परेको हुनसक्छ वा उनी आफै वेइमानी गरिरहेकी छिन् ।
महरा प्रकरणले कम्युनिष्ट पार्टीका सबै मतदातामाथि नैतिक संकट देखिएको छ, महरालाई मतदान गर्ने दाड.निवासीहरुको शीर झुकाएको छ र कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुर्नाम त भएकै छ भित्री तथ्यहरु छताछुल्ल भएका अवस्थामा वोली नसक्नु पारेको छ । यी सबैको परिणामहरुको विशद् विवेचना अहिले नै गरिहाल्नु पर्दैन भविष्यमा विवेचना हुदै जाने छ ।